पत्रपत्रिका Archives - मूल्याङ्कन अनलाइन
चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावको पर्खाइमा निगम
चीनसँग इन्धन खरिद प्रक्रिया पूरा
कार्तिक ३०, काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले चीनसँग कागजात तथा आवश्यक विवरण पेस गरी इन्धन खरिद पूर्वका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ । अब चीनको प्रस्तावको पर्खाइमा रहेको निगमले जनाएको छ । कम्पनीको वासलातदेखि अन्य कागजात पेट्रो चाइना कम्पनी लिमिटेडेलाई पठाइसकेको निगमले जनाएको छ । ‘शनिबार सबै विवरणसहित कम्पनीको क्रेडिट कन्ट्रोलमा निगमको नाम दर्ता भइसकेको छ । अब उसको प्रस्तावको पर्खाइमा छौं,’ निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराइले भने, ‘हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौं । सायद चाँडै प्रस्ताव आउला ।’ अब पेट्रो चाइनासँग निगम इन्धनको प्रकार, मूल्य र ढुवानीको बृहत् विषयमा छलफल गरी सम्झौता गर्ने पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।पूरा पढ्नुहोस्
स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि ५ बुँदे बर्दिवास घोषणापत्र जारी
असोज २९, बर्दिवास स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि ५ बुँदे बर्दिवास घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति र प्रस्तावित कानून एवं संरचना विषयको अन्तरक्रिया शनिबार सम्पन्न भएको छ ।पूरा पढ्नुहोस्
पूर्वकूटनीतिज्ञ र सुरक्षाविज्ञसँग मोर्चा नेताको अन्तर्क्रिया
मंसिर २३, नयाँदिल्ली । कसले के भने ? भारत भ्रमणमा रहेका लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले मधेस आन्दोलनमा समर्थन गर्न भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीलाई आग्रह गरेका छन् । भारतकोपूरा पढ्नुहोस्
सीमा अवरोध हटाउन मोर्चा पनि सकारात्मक
अवरोध हटाएर सहमति खोज्न मोर्चालाई दिल्लीको सुझाब भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले सीमा अवरोध हटाएर संवादमार्फत राजनीतिक सहमति खोज्न मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेकापूरा पढ्नुहोस्
छिंघाईबाट इन्धन ल्याउने तयारी
आज चीन जाँदै नेपाली टोली सरकारले चीनको छिंघाई प्रान्तबाट इन्धन आयात गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि अध्ययन र चिनियाँ अधिकारीसँग वार्ता गर्न नेपाली टोली आज त्यसतर्फ जाँदै छ । छिंघाईपूरा पढ्नुहोस्
‘समाजवादी क्रान्तिको मोडेल के हो ?’
म‌ंसिर २०, काठमाडौँ । एमाओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा समाजवादी क्रान्तिको मोडेलबारे प्रश्न उठेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले समाजवादी क्रान्तिको मोडेल के हो भन्नेपूरा पढ्नुहोस्
नाका खोल्न मधेसी मोर्चालाई भारतको सुझाव
मंसिर २१, नयाँ दिल्ली । भारतले संसद्बाट संविधान संशोधनमार्फत मधेसीका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने र तराईमा जारी सीमा अवरोध हट्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मधेसी मोर्चाका शीर्षपूरा पढ्नुहोस्
भारतको झन् कडा प्रश्न
‘नेपाल मित्रता चाहन्छ कि चाहँदैन ?’
मंसिर १७, काठमाडौँ । भारतले नेपाल आफूसँग मित्रता चाहन्छ कि चाहँदैन भनेर प्रश्न उठाउँदै अघोषित नाकाबन्दी खुल्न मधेसीसँग सहमति हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । नयाँदिल्लीमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग बुधबारपूरा पढ्नुहोस्
केन्द्रीय समितिमा प्रचण्डको प्रतिवेदन
संविधानमा कसले के पाए ?
मंसिर १७, काठमाडौँ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ संविधानबाट महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, श्रमिक तथा किसान, उत्पीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनता र खस–आर्य समुदायले के उपलब्धि प्राप्त गरेपूरा पढ्नुहोस्
यादव र महतोबीच मतभेद बढ्दै
मंसिर १६, काठमाडौँ । मधेसमा आन्दोलनरत संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच मतभेद बढेको छ। यसले आन्दोलनमा समेत असर परिरहेको निकटस्थहरूको बुझाइ छ। दुई नेताबीचपूरा पढ्नुहोस्
एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन
मधेस आन्दोलनको समाधान वार्ताबाटै
मंसिर १६, काठमाडौँ । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेस आन्दोलनको समाधान वार्ताबाटै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । पेरिसडाँडा मुख्यालयमा मंगलबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा २७पूरा पढ्नुहोस्